सावधान ! फेस एप हुन सक्छ घातक, सूचना मात्रै होइन यसबाट आदतसम्म चोरी हुन सक्छ ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०३, २०७६ समय: ८:२८:०३
यसैगरी डाटाहरु पनि संकलन नगर्ने जनाएको छ । प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको फोटोलाई आफूले अपलोड मात्रै गर्ने समेत सो कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आर एण्ड डी टिम रसियामा रहे पनि डाटा रसियालाई उपलब्ध नगराइने कम्पनीको वक्तव्यमा दाबी गरेको छ । यद्यपि सुमेरले एफबीआई र फेडरल ट्रेड कमिसनले फेस एपको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । (बीबीसीबाट)